October 2015 | ပြည်သတင်း
ပဲခူးတိုင်းအနောက်ပိုင်း ပြည်မြို့သို့ အောက်တိုဘာ ၃၁ ရက်နေ့က ပြည်ခိုင်ဖြိုးပါတီအား မဲထည့်ရန် ပဲခူးတိုင်း ဝန်ကြီးချုပ် ဦးဥာဏ်ဝင်းကိုယ်တိုင် လာရောက်မဲဆွယ် စည်းရုံးမှုများ ပြုလုပ်ခဲ့သည်။
ဓာတ်ပုံ-Myanmar Pressphoto Agency
ဘယ်သူ.ကိုမဲပေးကြမလဲဟူသောမေးခွန်းသည် ယခုလိုရွေးကောက်ပွဲနီးကပ်လာသောကာလတွင်အတော်ကျယ်လောင်လာတာတွေ.ရလေသည် ။ မဲပေးကြဖို. မဲဆန္ဒရှင်များအကြားဆွေးနွေးပြောဆိုကြရာတွင် အောက်ပါတိုင်းအဓိကအငြင်းအခုန်ဖြစ်ကြတာတွေ.ရလေသည်။
(က) NLD ကိုမဲပေးလိုသူ
(ခ) လက်ရှိအစိုးရပါတီဖြစ်သော ကြံ.ခိုင်ရေးကိုမဲပေးလိုသူ
(ဂ) မိမိတို.ဒေသအတွင်းမှ တိုင်းရင်းသားပါတီ အမတ်များကိုမဲပေးလိုသူ
(ဃ) ပါတီစွဲမရှိပဲ တသီးပုဂ္ဂလ ထဲမှကောင်းနိုးရာရာကိုယ်စားလှယ်လောင်းကိုမဲပေးလိုသူ
ဟူ၍ အကြမ်းအားဖြင်. လေးဖွဲ.ကွဲပြားနေသည်ကိုတွေ.ရပေသည် ။ ထိုလေးခုထဲတွင်မပါပဲ ပါတီပေါင်း (၉၂)ပါတီရှိသည်.အနက်အခြားပါတီတစ်ခုခုကိုမဲပေးလိုသူ အနည်းစုလည်းရှိနိုင်ပါသေးသည် ။ ထိုအမျိုးအစားလေးမျိုးကိုပဲ ဆန်းစစ်ကြည်.ကြပါစို. ။ နံပါတ် (က) အမျိုးအစားမှာ လူများစုဖြစ်သည်ဟုရွေးကောက်ပွဲအကြိုကာလ မဲဆွယ်စည်းရုံးပွဲများတွင် NLD ထောက်ခံသူများကိုကြည်.လျှင်တွေ.နိုင်၏ ။ထိုလူစုသည် NLD နိုင်မှ စစ်မှန်သောအပြောင်းအလဲများဖြစ်ပေါ်လာမည်ဟုယုံကြည်သူများဖြစ်သည် ။ အမှတ်စဉ်(ခ) ကိုထောက်ခံသူများမှာ ပိုနေမြဲကျားနေမြဲပဲကောင်းသည်ဟုထင်သူများ ၊ NLD နိုင်လျှင် ဘာသာခြားများလွမ်းမိုးတော.မည်ဟုထင်နေသူများ ၊ လက်ရှိ အစိုးရထံမှ ကောင်းကျိုးတစ်စုံတစ်ရာ ရရှိနေသူများ ပါဝင်ပါသည် ။ နံပါတ်(ဂ) အဖွဲ.များမှာ လူမျိုးစွဲပြင်းထန်လှသော တိုင်းရင်းသားများဖြစ်သည် ။ ထိုသူတို.၏အယူမှာ မိမိဒေသကို မိမိလူမျိုးကသာ ကိုယ်စားပြုသင်.သည်ဟူ၍ဖြစ်သည် ။ (ဃ)အဖွဲ.ကိုထောက်ခံမည်.သူများကတော. ပါတီထက် လူကိုသာအဓိကကြည်.သင်.သည်ဟူသော အမြင်ရှိသူများဖြစ်သည် ။ ထိုသူများကတော. ပါတီစွဲမထားပဲ တသီးပုဂ္ဂလအပါအ၀င် စွမ်းဆောင်ရည်ကောင်းမည်.အမတ်လောင်းများကိုမဲပေးကြမည်ဖြစ်သည် ဟုခန်.မှန်းရသည် ။
မကြာသေးမီရက်ပိုင်းက DVB debate အစီအစဉ်တွင် why we should vote ? ဟူသောခေါင်းစဉ်ဖြင်.ဆွေးနွေးကြသည်ကို သွားရောက်လေ.လာနားထောင်လေ.လာခွင်.ရခဲ.ပါသည် ။ ထို စကားဝိုင်းတွင် လာရောက်ဆွေးနွေးသောရှမ်းတိုင်းရင်းသားတစ်ဦး ၊ မွန်တိုင်းရင်းသား လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းတစ်ဦး ၊ တစ်သီးပုဂ္ဂလ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းတစ်ဦးတို.ဖြစ်သည် ။ တိုင်းရင်းသားတို.သည် သူတို.မဲဆန္ဒနယ်တွင် NLD လာရောက်ယှဉ်ပြိုင်ခြင်းကိုမလိုလားသည်.သဘောမျိုးပြောကြားသွားသည်ကိုကြားရပါသည် ။ တသီးပုဂ္ဂလကိုယ်စားလှယ်များကလည်း တစ်နိုင်ငံလုံးတွင် ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်အတွက်ရွေးကောက်ခံအမတ်နေရာစုစုပေါင်း ၄၉၈ နေရာရှိသည်.အနက် NLD သည် ၃၃၃ နေရာတွင် အနိုင်ရလျှင် အစိုးရဖွဲ.နိုင်ပြီဖြစ်သဖြင်. ကျန်သော ၁၆၅ နေရာတွင် ၀င်ရောက်မယှဉ်ပြိုင်ပဲ တိုင်းရင်းသားနှင်. တသီးပုဂ္ဂလ ကိုယ်စားလှယ်များကိုနေရာဖယ်ပေးသင်.ကြောင်းပြောကြားတာတွေ.ရပေသည် ။ ဤတွင်ဆွေးနွေးစရာနည်းနည်းရှိလာပြီဖြစ်သည် ။
ပထမဆုံးနားလည်ရမည်မှာယခုကျင်းပသောရွေးကောက်ပွဲသည် ဒီမိုကရေစီတင်းပြည်ကျပ်ပြည်.ရရှိထားသောနိုင်ငံကြီးများမှာကဲ.သို. ဥပဒေပြုအမတ်များကို ပြည်သူလူထုက ၁၀၀ ရာခိုင်နှုန်းရွေးချယ်ပေးရသောစနစ်မဟုတ်ဘူးဆိုတာဖြစ်သည် ။ ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်တွင်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် စုစုပေါင်း ၆၆၄ ဦးရှိသည်.အနက် ၁၆၆ ဦးသော တပ်မတော်သား ကိုယ်စားလှယ်များက ရွေးကောက်ပွဲမ၀င်ပဲ အခန်.သား လွှတ်တော်ထဲတွင်ရောက်ရှိနေနှင်.ပြီးသောစနစ်ဆိုးကြီးအောက်တွင် ရွေးကောက်ယှဉ်ပြိုင်ရခြင်းဖြစ်သည်ကိုသတိချပ်ရန်လိုသည် ။ ဒုတိယအချက်မှာ မြန်မာနိင်ငံတွင်ကျင်းပသော သမ္မတရွေးချယ်ပုံစနစ်မှာ နိုင်ငံတကာမှာ လို သမ္မတရွေးကောက်ပွဲလုပ်၍ပြည်သူလူထုကတိုက်ရိုက်တင်မြှောက်သောစနစ်မဟုတ်ပဲ ရွေးကောက်ပွဲတွင် အနိုင်ရသောအမတ်များနှင်.တပ်မတော်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် များ စုစုပေါင်း ( ၆၆၄)ဦးက ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်တွင် လူသုံးဦးကိုမဲပေးရွေးချယ်ကြရသောစနစ်ဖြစစ်နေခြင်းဖြစ်သည် ။ ထိုသမ္မတလောင်းသုံးဦးကို တပ်မတော်တာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ကတစ်ဦးရွေးချယ်ပေးသည် ။ ရွေးကောက်ခံအမတ်လူဦးရေ ၃၃၀ ပါဝင်သော ပြည်သူ.လွှတ်တော်က တစ်ယောက်ရွေးချယ်ပေးရသည် ။ရွေးကောက်ခံလွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် ၁၆၈ ဦးပါဝင်သော အမျိုးသားလွှတ်တော်က တစ်ယောက်ရွေးချယ်ပေးရသည် ။ထိုသုံးယောက်ထဲကမှ ၆၆၄ ဦးစုံညီအဖွဲ.က တစ်ယောက်မဲပေးရွေးကြခြင်းဖြစ်သည် ။ အလွယ်သဘောပြောရလျှင် ထို လူ ၆၆၄ ယောက်ထဲတွင် ကိုယ်.လူ ၃၃၃ ဦး ရှိလျှင် ထက်ဝက်ကျော်ဆန္ဒမဲဖြင်. ကိုယ်.လူ သမ္မတဖြစ်မည်ဖြစ်သည် ။ထိုသမ္မတကအစိုးရအဖွဲ.ဖွဲ.မည် ။ ပြည်နယ်နှင်.တိုင်း ၁၄ ခု၏ ၀န်ကြီးချုပ်များကိုအမည်စာရင်းတင်သွင်းမည် ။ အုပ်ချုပ်ရေးယန္တယားကိုကိုင်တွယ်မည် ။ အစိုးရဖြစ်မည် ။ ထို.ကြောင်.အဓိကအခရာမှာ မြန်မာတစ်ပြည်လုံးမှ ကိုယ်စားလှယ် ၃၃၃ ယောက်ရရေးသည် (စစ်တပ်နှင်.လက်ဝါးရိုက်မထားနိုင်သောပါတီအဖို. ) သေရေးရှင်ရေးအရေးကြီးလှသည် ။ ပြည်ခိုင်ဖြိုးပါတီကဲ.သို.သော စစ်တပ်နှင်.တစ်သားတည်းဖြစ်နေသောပါတီအတွက်မူ တပ်မတော်သားကိုယ်စားလှယ် ၁၆၆ ဦး၏ထောက်ခံမဲများပါရရှိပြီးဖြစ်သောကြောင်. ရွေးကောက်ပွဲတွင် ၁၆၇ ဦးနိုင်ရုံနှင်. ( ၁၆၆+ ၁၆၇ = ၃၃၃ )ဖြစ်ကာ အစိုးရဖွဲ.နိုင်မည်ဖြစ်သည် ။ ထိုအခါ ယခုပြည်သူလူထုကြုံခဲ.ရသော အုပ်ချုပ်ရေးမျိုး ၊ လွှတ်တော်မျိုး ၊အစိုးရမျိုးကိုသာထပ်ပြီးရဦးမည်ဖြစ်သည် ။ NLD ကဲ.သို.သော တပ်မတော်၏ အားပေးကူညီမှုမရသော နိုင်ငံရေးပါတီများမှာ ပြည်သူလူထုကမဲပေးရွေးချယ်သောအမတ်နေရာ ၃၃၃ နေရာ ရမှသာ ဒီမိုကရေစီပြည်သူ.အစိုးရဖွဲ.နိုင်မည်ဖြစ်သည် ။
ထို.ကြောင်.အစိုးရအပြောင်းအလဲကိုလိုချင်သည်ဆိုလျှင် NLD ပါတီ အနည်းဆုံး ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်တွင် အမတ် ၃၃၃ ဦးရွေးကောက်တင်မြှောက်ခံရရန်လိုပေလိမ်.မည် ။
ထိုသို.မဟုတ်ပါပဲ တိုင်းရင်းသားဒေသများမှ ပြည်သူလူထုသည် မိမိဒေသစွဲ ၊လူမျိုးစွဲဖြင်. လူမျိုးအမည်ခံပါတီများကိုအားပေးရွေးချယ်လိုက်ပါက တိုင်းရင်းသား ၁၃၅ မျိုး၇ှိသောနိုင်ငံ ၊ပါတီပေါင်း ၉၂ ပါတီရှိသော မြန်မာနိုင်ငံဝယ် မဲများကွဲပြားသွားကာ ဟိုပါတီနည်းနည်း ဒီပါတီနည်းနည်းဖြင်. မည်သူမျှ လွတ်လွတ်ကျွတ်ကျွတ်အစိုးရမဖွဲ.နိုင်ပဲ ပြည်ခိုင်ဖြိုးနှင်.စစ်တပ်အကြိုက်ဖြစ်သွားမည်ဖြစ်သည် ။ ရှင်းအောင်ပြောရလျှင် မဲပြားသွားပါက ပြည်ခိုင်ဖြိုးနှင်.တပ်မတော်အစိုးရပဲပြန်တက်လာမည်ဖြစ်သည် ။ ထိုအရာများကိုရပ်တန်.ချင်လျှင် ပြည်သူ.လွှတ်တော်နှင်. အမျိုးသားလွှတ်တော်တွင် အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ.ချုပ် (NLD ) ကိုမဲပေးသင်.ပေသည် ။ မိမိတို.၏တိုင်းရင်းသားများအတွက်မျိုးချစ်စိတ်ကိုပြချင်သည်ဆိုလျှင် ပြည်နယ်လွှတ်တော် (သို.မဟုတ်) တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်တွင် တိုင်းရင်းသား ကိုယ်စားလှယ်များကိုမဲပေးသင်.ပါသည် ။ ထိုအခါ NLD လည်းအစိုးရဖွဲ.နိုင် ၊ ထိုသို.အစိုးရဖွဲ.နိုင်သဖြင်. NLD မှတင်သောသမ္မတက ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်များ ကိုခန်.နိုင်သည်ဖြစ်ရာ တိုင်းရင်းသားထဲမှသင်.တော်သူများကို သမ္မတထံ အကြံပေးတင်ပြခြင်းဖြင်. သမ္မတနှင်. ပြည်နယ်လွှတ်တော် အပေးအယူလုပ်နိုင်ပေသည် ။ သူလည်းနိုင် ၊ ကိုယ်လည်းနိုင်သော Win Win Situation တစ်ခုကိုတည်ဆောက်နိုင်မည်ဖြစ်သည် ။ ထိုသို.မဟုတ်ပဲ သူ.လူမျိုး ၊ငါ.လူမျိုး ၊ သူ.အမတ်လောင်း ၊ကိုယ်.အမတ်လောင်း စသည်ဖြင်. ကျဉ်းမြောင်းသောလူမျိုးရေးဝါဒကိုအခြေခံစဉ်းစားနေကြပါက စစ်အာဏာရှင်လွှမ်းမိုးသောခေတ်ဆိုးကြီးသာ ပြန်ပေါ်လာပြီး သူရှုံးကိုယ်ရှုံး အားလုံးရှုံးသော You’re loser ,I’m loser , Everybody loser ဖြစ်ကုန်လိမ်.မည် ။ နိုင်ငံနှင်.လူမျိုးအတွက် ရေရှည်တွင်အကျိုးရှိနိုင်သော ပြည်ထောင်စုစိတ်ဓါတ်ဖြင်.သာ ပြည်သူ.ဘက်တော်သားပါတီတခုကိုမဲပေးရွေးချယ်သင်.ပါသည် ။ တိုင်းရင်းသားအခွင်.အရေးသည် စစ်အာဏာရှင်များလက်ထဲမှတောင်းခံရသည်ထက် ၊
တသီးပုဂ္ဂလအမတ်များသည်လည်း အမှန်တကယ် အရည်အသွေးရှိသည်ဟုပြည်သူလူထုကယုံကြည်လျှင် မဲဆန္ဒရှင်များက မဲပေးရွေးချယ်ကြမည်ဖြစ်ပါသည် ။ မည်သူတွေဝင်မပြိုင်မှ ၊ မည်သူတွေရှောင်ပေးမှဟုတွက်ဆမနေသင်.ပါ ။ အရေးအကြီးဆုံးအချက်မှာ တသီးပုဂ္ဂလအမတ်များသည် လွှတ်တော်ထဲရောက်သွား၍ သမ္မတရွေးပွဲတွင် ပါဝင်မဲပေးသောအခါ မည်သူ.ဘက်ကရပ်တည်မည် (အနည်းဆုံးတော. တပ်မတော်သားအစုအဖွဲ.မှရွေးချယ်သော သမ္မတလောင်းကို မဲမပေးပါဟူသော ကတိမျိုးတော. မဲဆန္ဒရှင်များကိုတိကျသော သတင်းစကားပါးနိုင်ရမည်ဖြစ်သည် ) ။ လွှတ်တော်ထဲရောက်မှ ငွေဖြင်.အ၀ယ်ခံလိုက်ရသောအဖြစ်မျိုးမဖြစ်နိုင်ကြောင်းအခိုင်အမာ ရှင်းလင်းစွာကြေငြာရမည်ဖြစ်သည် ။
NLD ပါတီအနေဖြင်.လည်း အစိုးရဖွဲ.နိုင်ပါက ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်များ ကို ထိုပြည်နယ်မှတိုင်းရင်းသားလွှတ်တော်အမတ်များအလိုကျ ရွေးချယ်ခန်.ထားပေးမည်ဟု ကတိပြုအာမခံကြေငြာချက်ထုတ်နိုင်ခဲ.လျှင် အတိုင်းထက်အလွန် အဆင်ပြေပေလိမ်.မည် ။ ထိုအခါ ကျွန်တော်တို.မဲဆန္ဒရှင်များသည် ရှမ်းဖြစ်စေ ၊မွန်ဖြစ်စေ ၊ကချင်ဖြစ်စေ ၊ကရင်ဖြစ်စေ ၊ချင်းဖြစ်စေ ၊ ကယားဖြစ်စေ ၊ရခိုင်ဖြစ်စေ NLD ကိုမဲပေးလိုက်ရုံပဲဖြစ်သည် ။ ၁၉၆၂ မှစကာ မြန်မာပြည်တွင် ဂုတ်သွေးစုတ်ချုပ်ကိုင်လာသောစစ်အာဏာရှင် အသွင်ပြောင်းမျိုးဆက်ကိုဖြုတ်ချနိုင်စရာဤတစ်နည်းသာရှိပါသည် ။ ၂၀၁၅ နိုဝင်ဘာ ၈ ရက်နေ.တွင်ကျင်းပသောရွေးကောက်ပွဲသည် သာမန်ရွေးကောက်ပွဲတစ်ခုမဟုတ် ၊ ပါတီတစ်ခု နှစ်ခု၏အရေးကိစ္စမဟုတ် ။ ကျွန်တော်တို.ပြည်သူများစစ်ကျွန်ပြန်ဖြစ်မဖြစ်ကို စာမေးပွဲစစ်ဆေးမည်.ပွဲကြီးဖြစ်သည် ။ထို.ကြောင်.ပေါ.ပေါ.ဆဆသဘောမထားပဲ ခေတ်ပြောင်းတော်လှန်ရေးတစ်ခုဆင်နွှဲသလို တနိုင်ငံလုံးကညီညာဖျဖျ ပြည်သူ.ဘက်တော်သားများကိုမဲပေးကြဖို.လိုသည် ။
ရှင်းအောင်ပြောရလျင် ပြည်သူ.လွှတ်တော်နှင်. အမျိုးသားလွှတ်တော်အတွက် NLD ကိုမဲပေးပါ ။ ပြည်နယ်လွှတ်တော်အတွက် သင်ကြိုက်နှစ်သက်သောတိုင်းရင်းသားပါတီနှင်.တသီးပုဂ္ဂလကိုမဲပေးရွေးချယ်ကြပါ ။ စစ်အာဏာရှင်လက်အောက်မှလွတ်မြောက်ပြီးသော ၂၀၂၀ ရွေးကောက်ပွဲတွင်တော. သင်ကြိုက်ရာ တိုင်းရင်းသားပါတီနှင်.ကြိုက်ရာလူကို မဲပေးရွေးချယ်နိုင်ပါသည် ။ မဲတစ်မဲသည်ကျည်ဆန်တစ်တောင်.ဖြစ်၏ သင်.လက်ထဲမှကျည်ဆန်သည်သင်.ကိုပြန်ပစ်မည်.သေနတ်အတွက်မဖြစ်ပါစေနှင်. ။
Pyae Phyo (ပြည်) LeaveaComment
အောင်ဆန်းတိုးချဲ့ကွက်သစ်(2)လမ်း၊ B လမ်း
အလျှား 70" ပေ အနံရှေ့ 30" ပေရေမီးအစုံ
ဆက်သွယ်ရန် 09 /4236 84602 /053/27836
ပြည်သတင်း ( www.facebook.com/pyaynews )
မှ လုပ်ငန်းရှင်များနှင့် အလုပ်ရှာဖွေနေသူများ
09 430 47862 သို့ SMS မှဖြစ်စေ၊ Viber မှ ဖြစ်စေ
ရေးသားပေးပို့နိုင်ပြီး၊ Facebook အသုံးပြုသူများအ
တွက်လည်း www.facebook.com/pyaynews သို့
လည်း massage ဖြင့် ရေးသားပေးပို့နိုင်ပါသည်။
09 430 47862
U Kyaw Hsan ( English Language School )
ပဲခူးတိုင်း အနောက်ခြမ်း ပြည်မြို့၌ ကြိုတင်မဲများ စတင်ပေး
ပြည်မြို့ ဆံတော်ရပ်ကွက်၌ ယနေ့ (အောက်တိုဘာ ၂၉) ရက်တွင် ကြိုတင်မဲ စတင်ပေးနေပြီ ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။ ဆံတော်ရပ်ကွက်ရှိ
ကြိုတင်မဲပေးရန် လျှောက်ထားထားသည့် မီးရထားရဲဝန်ထမ်းများ ကြိုတင်မဲစတင် ပေးနေခြင်းဖြစ်ပြီး စတင်မဲပေးသည့်နေ့မှာပင် လာရောက်မဲပေးသည့်ရဲဝန်ထမ်းများမှာ မဲပေးနည်းစနစ်ကို သိရှိထားသူနည်းပါးပြီး တံဆိပ်တုံး ထုရန်အခက်ခဲဖြစ်နေကြောင်း သိရသည်။
K.T.Z Co. Ltd (Pyay Branch)
Promotion Girl (PG)2Post
မှ လုပ်ငန်းရှင်များနှင့် အလုပ်ရှာဖွေနေသူများ အဆင်ပြေစေရန် ဝန်ထမ်းခေါ်ယူခြင်းနှင့် အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများအတွက်
ရေးသားပေးပို့နိုင်ပြီး၊ Facebook အသုံးပြုသူများအတွက်လည်း www.facebook.com/pyaynews သို့လည်း massage ဖြင့် ရေးသားပေးပို့နိုင်ပါသည်။
ပြည်မှာလုပ်တဲ့ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများ လွတ်မြောက်ရေးကမ်ပိန်း
နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားအားလုံးလွှတ်ပေးရေးနှင့်သာယာဝတီအကျဉ်းထောင်တွင် အစာငတ်ခံဆန္ဒဖော်ထုတ်နေသည့် ကိုအောင်မှိုင်းဆန်းအား အားပေးဝန်းရံသည့်အနေဖြင့် ကမ်ပိန်းကို ပြည်ခရိုင်နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားဟောင်းများနှင့်ဗ.က.သ ကျောင်းသားများက ပြည်မြို့တွင် အောက်တိုဘာ ၂၈ရက်နေ့က ပြုလုပ်ခဲ့ကြကြောင်းသိရသည်။
ဓာတ်ပုံ Myanmar Pressphoto Agency
အလွတ်တန်း ဖိတ်ခေါ်စားပွဲတင်တင်းနစ်ပြိုင်ပွဲ ပြည်မြို့တွင်ကျင်းပ
မြန်မာနိုင်ငံတစ်ဝန်းရှိ အ လွတ်တန်းစားပွဲတင် တင်းနစ်အားကစားသမားများ ဖိတ်ခေါ်ပြိုင်ပွဲကို ပြည်မြို့ရှိ ထျန့်ဟိုကုန်းစားပွဲတင် တင်းနစ်အသင်းမှ ဦးဆောင်ကာ ကမ်းနားလမ်းရှိ ဧရာဦးခန်းမတွင် အောက်တိုဘာ ၂၄ ရက်နှင့် ၂၅ ရက်က ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်း သတင်းရရှိသည်။
‘‘အခုပွဲမှာ နိုင်ငံအဆင့်အား ကစားသမားတွေလည်းပါတယ်။ ရည်ရွယ်ချက်ကတော့ စားပွဲတင် တင်းနစ်အားကစားတိုးတက်လာ စေပြီး ပိုမိုကျယ်ပြန့်လာစေဖို့ရယ်၊ ဒီလို ပြိုင်ပွဲတွေကနေ နိုင်ငံ့ဂုဏ် ဆောင်နိုင်တဲ့ အားကစားသမား တွေပေါ်ထွက်လာစေဖို့ ရည်ရွယ် ကျင်းပပေးရခြင်းဖြစ်ပါတယ်’’ဟု ထျန့်ဟိုကုန်းစားပွဲတင်တင်းနစ် အသင်းမှ ဦးမျိုးလင်းက ပြော သည်။
ပြိုင်ပွဲတွင် မန္တလေး၊ ဟင်္သာ တ၊ တောင်ကြီး၊ မိတ္ထီလာ၊ မြစ် ကြီးနား၊ အုတ်ဖို၊ မအူပင်၊ ကျိုက် လတ်၊ မော်လမြိုင် စသည့်မြို့များ မှ အားကစားအသင်း ၂၈ သင်း၊ အားကစားသမား ၉၁ ဦး ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်ခဲ့ကြသည်။
မြန်မာနိုင်ငံ အလွတ်တန်း ဖိတ်ခေါ်စားပွဲတင် တင်းနစ်ပြိုင်ပွဲ ကို ပြည်မြို့တွင် ကျင်းပလာခဲ့ သည်မှာ လေးနှစ်ရှိပြီဖြစ်ပြီး လာ ရောက်ယှဉ်ပြိုင်ကြသော အား ကစားသမားများ နေထိုင်စား သောက်ရေးနှင့် ဆုကြေးငွေအား ထျန့်ဟိုကုန်းစားပွဲတင် တင်းနစ်အသင်းနှင့် မြို့မိမြို့ဖတို့က ပံ့ပိုးကူ ညီဆောင်ရွက်ပေးခြင်းဖြစ်သည်။
ယခုပြိုင်ပွဲအတွက် ပထမဆုကျပ်သုံးသိန်း၊ ဒုတိယဆု ကျပ်နှစ်သိန်းနှင့် တတိယဆုနှစ်ဆုသည် ပူးတွဲဆုဖြစ်ပြီး တစ်ဆုလျှင်ကျပ်တစ်သိန်းစီ ဂုဏ်ပြုချီးမြှင့်ခဲ့သည်။
ပြည်မြို့တွင် ဘာသာပေါင်းစုံ နှီးနှောဖလှယ်ပွဲ ကျင်းပ
ဘာသာပေါင်းစုံနှီးနှောဖ လှယ်တွေ့ဆုံပွဲကို အောက်တို ဘာ ၂၄ရက်က ပြည်မြို့တော်ဝင် ရတနာခန်းမတွင် ပြည်မြို့ရှိ ဘာ သာပေါင်းစုံငြိမ်းချမ်းမေတ္တာအဖွဲ့ (Religions For Peace)က ဦးဆောင်ကျင်းပခဲ့ကြောင်းသတင်း ရရှိသည်။
‘‘လက်နက်ကိုင်တိုက်ပွဲဝင် နေကြသူတွေနဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေးကို တည်ဆောက်ကြရသလို ဒါတွေ သာမက နိုင်ငံအတွင်းမှာရှိတဲ့ကိုး ကွယ်မှုအမျိုးမျိုးစတဲ့ ဘာသာရေး အရကွဲပြားသူတွေလည်း အေး ချမ်းစွာ၊ ငြိမ်းချမ်းစွာအတူတကွ မေတ္တာတရားရှေ့ထားပြီး နေထိုင် နိုင်ကြဖို့ ရည်ရွယ်ကျင်းပတာဖြစ် ပါတယ်’’ဟု ပြည်မြို့ ငြိမ်းချမ်း မေတ္တာ အတွင်းရေးမှူး ဦးခင်မောင်ဝင်းကပြောသည်။
ဘာသာပေါင်းစုံ နှီးနှောဖ လှယ်ပွဲသို့ သံဃာတော်အရှင်သူ မြတ်များ၊ ခရစ်ယာန်ဘာသာဝင် ဆရာတော်များနှင့် ဘာသာဝင် များ၊ ဟိန္ဒူဘာသာရေးခေါင်း ဆောင်များ၊ အစ္စလာမ်ဘာသာရေး ခေါင်းဆောင်များတက်ရောက်ခဲ့ပြီး ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်အသီးသီးက ငြိမ်းချမ်းရေးနှင့် ဘာသာရေးဆိုင်ရာများပြောကြား ကာမေတ္တာတရားရှေ့ထား၍ နှီးနှောပြောဆိုခဲ့ကြသည်။
‘‘ကျွန်တော်က ဗုဒ္ဓဘာသာ ပါ။ ဒါပေမဲ့အခုလို ဘာသာပေါင်း စုံငြိမ်းချမ်းရေးနှီးနှောဖလှယ်ပွဲထဲ ရောက်ပြီဆိုတာနဲ့ ကိုယ်ဟာဘယ် ဘာသာဝင်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုအ ပေါက်ဝမှာထားခဲ့တယ်။ လူသား တစ်ယောက်အနေနဲ့ ၀င်လာပြီး ငြိမ်းချမ်းရေးကိုတည်ဆောက်ဖို့ လိုပါတယ်။ သူကဘယ်သာဘာ၊ ကိုယ်ကဘယ်ဘာသာစတာတွေ ကြောင့် ပြဿနာတွေဖြစ်ရတာမို့ အဲဒီလေဘယ်လေးတွေဖြုတ်ပြီး ငြိမ်းချမ်းရေးကိုတည်ဆောက် ကာ အေးအေးချမ်းချမ်းနေထိုင် သွားကြဖို့ လိုပါတယ်’’ဟု ပြည်မြို့ နယ်ဘာသာပေါင်းစုံငြိမ်းချမ်းရေး အဖွဲ့ဥက္ကဋ္ဌဦးသန်းဇော်ကပြော သည်။
ပြည်မြို့တွင်း ယာဉ်လိုင်းများမှ ယာဉ်လုပ်သားများကို ယာဉ်ဥပဒေသစ်ဆိုင်ရာများ ပထမဆုံးအကြိမ် ရှင်းလင်း
ပြည်မြို့တွင်း ယာဉ်လိုင်း များမှ ယာဉ်မောင်းနှင့် ယာဉ် နောက်လိုက်များအား ယာဉ်စည်း ကမ်း၊ လမ်းစည်းကမ်းဥပဒေသစ် အကြောင်းအရာများကို အောက် တိုဘာ ၂၅ ရက်က ပထမဆုံးအ ကြိမ် အသိပညာပေးရှင်းလင်းခဲ့ ကြောင်း ပြည်ခရိုင် ယာဉ်ထိန်း ရဲတပ်ဖွဲ့မှ သတင်းရရှိသည်။
‘‘အခုအသစ်ထုတ်ပြန်ထား တဲ့ ဥပဒေအကြောင်းအရာတွေ၊ ဒဏ်ကြေးငွေ မြင့်မားလာတဲ့အ ကြောင်း၊ ခရီးသည်လုတင်ရာက နေ အပြိုင်အဆိုင် မဆင်မခြင်မမောင်းနှင်ကြဖို့ စတဲ့အသိပညာ ပေး ရှင်းလင်းတာဖြစ်တယ်’’ ဟု ပြည်ခရိုင် ယာဉ်ထိန်းရဲတပ်ဖွဲ့မှ ဒုရဲမှူး ဝင်းနိုင်ဦးက ပြောသည်။
စက်တင်ဘာ ဒုတိယပတ် အတွင်းက ပြည်သူ့လွှတ်တော်က ဥပဒေအမှတ် ၅၅ ဖြင့် ပြဋ္ဌာန်း လိုက်သည့် ယာဉ်စည်းကမ်း၊ လမ်း စည်းကမ်းဆိုင်ရာဥပဒေသစ်တွင် ယခင်က ငွေဒဏ်များသာရှိသော ဥပဒေပုဒ်မများ၌ ပထမအကြိမ်ကျူးလွန်လျှင် ငွေဒဏ်၊ ဒုတိယ အကြိမ်ကျူးလွန်လျှင် ထောင် ဒဏ်များပင် ပါဝင်လာကြောင်း၊ ဆိုင်ကယ်စီးဦးထုပ် မဆောင်း လျှင် ယခင်က ၁,၅၀၀ ကျပ်သာ နိုင်ငံတော်အခွန် ပေးဆောင်ရ သော်လည်း ယခုဥပဒေသစ်တွင် ကျပ် ၃၀,၀၀၀ အထိ ရှိလာ ကြောင်း ပြည်ခရိုင် ယာဉ်ထိန်းရဲတပ်ဖွဲ့မှ သိရသည်။
ယာဉ်စည်းကမ်း၊ လမ်းစည်း ကမ်းလိုက်နာသော ယာဉ်မောင်း နှင့် ယာဉ်နောက်လိုက်များ ဖြစ် လာစေရန် ရည်ရွယ်ပြီး အသိ ပညာပေးခြင်းကို အောက်တိုဘာ ၂၅ ရက်က ပြည်ခရိုင် ယာဉ်လုပ် ငန်းများ ကြီးကြပ်ရေးအဖွဲ့ရုံးတွင် ရှင်းလင်းဟောပြောခဲ့ခြင်း ဖြစ် သည်။
ပြည်မြို့တွင် ခေတ္တရာမောင်၊ မြတ်သီဟ၊ မာဇဒါ၊ ရွှေသမင်၊အမြန်ယာဉ် စသည့်မြို့တွင်းယာဉ် လိုင်းငါးလိုင်းရှိပြီး အဆိုပါယာဉ် လိုင်းများမှ ယာဉ်မောင်း၊ ယာဉ် နောက်လိုက် ၆၀ ဦးတက်ရောက် ခဲ့သည်။
ထပ်မံထုတ်ပြန်ထားသော ယာဉ်စည်းကမ်းဆိုင်ရာများ ရှင်း လင်းအသိပေးခြင်းကို အပတ်စဉ် တစ်ပတ်လျှင် တစ်ကြိမ်ရှင်းလင်း ပြောကြားသွားရန် စီစဉ်ထားပြီး မြို့တွင်းယာဉ်လိုင်းများသာမက သုံးဘီးဆိုင်ကယ်၊ ကုန်တင်ယာဉ် များကိုလည်း အသိပညာပေးရှင်း လင်းခြင်းများ ပြုလုပ်မည်ဟု ဒုရဲ မှူး ဝင်းနိုင်ဦးက ပြောသည်။
‘‘ပြည်မှာက ဈေးကြီးဝန်း ကျင်လမ်းတွေဆို ယာဉ်ကြော ပိတ်ဆို့မှုအများဆုံးဖြစ်တယ်။ မြို့ တွင်း ယာဉ်လိုင်းတွေတင်မဟုတ် ဘဲ အိမ်စီးကားတွေ၊ ဆိုင်ကယ် တွေပါ စည်းကမ်းလိုက်နာမှုမရှိ တာတွေ တွေ့ရတယ်။ ယာဉ်တိုက်မှုကြောင့် လူသေတာမျိုးလည်း မကြာခဏကြားရတယ်။ ယာဉ်မဝင်ရဆိုလည်း ဝင်ကြတယ်။ မရပ်ရတဲ့နေရာလည်း ရပ်ကြတယ်။ မီးနီဖြတ်မောင်း၊ အဝိုင်းပတ်ယာဉ်ကို ဦးစားမပေး၊ ယာဉ်မကျော်တက်သင့်တဲ့နေရာ ကျော်တက်ကြတယ်။ မသိတာလား၊ သိသိချည်းနဲ့ လုပ်နေတာလားတော့ မသိတော့ဘူး။ ဟိုတစ်လောကလည်း မြို့တွင်းယာဉ်လိုင်းနှစ်ခု ခရီးသည်လုတင်ရင်း အုပ်စုဖွဲ့ရန်ဖြစ်တာ ယာဉ်မောင်းတစ်ဦး ဆေးရုံရောက်ခဲ့တယ်’’ဟု ပြည်မြို့ခံ တစ်ဦးက ပြောသည်။